Cappuccino sy ny lainga amin'ny fonosana | Martech Zone
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nijanona tao amin'ny burrito McSkillet handeha hiasa. Azoko atao angamba ny manoratra lahatsoratra iray momba ny fitiavako ireo sy ny burrito maraina fisakafoanana ao Qdoba, fa kosa hiantra anao aho. Nandritra ny McDonalds, ny fahalalako ny fahalianana dia nahazo ny tsara indrindra tamiko ary nandidy an'i McCafe Mocha aho fa tsy hijanona eo fivarotana kafe ankafizinao.
Famantarana maroloko sy be pitsiny ary fonosana miaraka amin'ny tonon-tany no manodidina anao ary ahatsapanao fa toa miakatra amin'ny kafe eropeana ianao. Tsy ianao, na izany aza. Nijery tsara aho rehefa nanindry ny bokotra havanana ilay olona ao ambadiky ny kaontera, nanetsiketsika ny ao anatiny, ary nopetehiny tamin'ny crème whipped sy sôkôla.
Tonga tany amin'ny fiara aho, nandray ny otro voalohany ary… blech. Tsy azoko antoka hoe inona no nitranga, mino aho fa nisy tsy fetezana tamin'ny masinina na zavatra hafa, saingy nitifitra toy ny tifitra expresso ratsy voasaron'ny crème whipped. Saika azoko atao ny mamoaka kafe rehetra (tao amin'ny Navy aho noho ny hatsaram-panahy), saingy tsy maintsy nariako izy. Mazava ho azy, ny ekipan'izy ireo dia tsy hahafantatra raha misy olana ihany koa - na kely aza noho ny fahafantarany ny hen'omby tsara. 😉
Manana isika Starbucks ambany rihana avy amin'ny asako, ka sarotra ho an'ny homamiadana kafe ny mandalo. Tiako indrindra ny siram-dipoaram-bahinin'izy ireo… tahaka ny nahitan'ny razambentsika fa nanana cocaine i Coca-Cola, matahotra aho sao ho hitantsika fa misy zavatra tsy ara-dalàna ao aminy i Starbucks Peppermint.
Starbucks dia manana logo mazava sy madio ary mazava izay nilaza tamin'ny olona manodidina anao fa, "Manana vola be aho ka afaka mandany $ 4 amin'ny tsaramaso may.”(Miantso azy io ny sasany amin'ny namako Fourbucks). Indrisy, nanomboka nanjavona ilay sary famantarana ara-kolotsaina izay Starbucks. Mahalana aho no mahatratra ny andalana lava ary afaka mamaky Starbucks mora foana toy ny tobin-dasantsy misy fitoeran-kafe. Mbola kanto sy manavaka ihany anefa ny kaopy.
Amin'ny ankavia dia angamba ny kafe tiako indrindra. Ireo namako akaiky Jason sy Chris dia mitantana fivarotana kafe mahafinaritra, Ny amboaram-boanjo manodidina ny tranoko.
Ny kafe dia nohafarana avy any amin'ny roaster kafe avy any Hamilton, Ontario. Ny sipoka rehetra, na dia decaffeine aza dia mbola milamina sy manankarena ary mamy be. Sarotra ny manazava ny fahasamihafana misy amin'ny voanjo voaendy, notsofina ary natsatsika, ka afaka mamokatra rano mamy sy mamy mamy. Ireo barista ao Fivarotana kafe tsara indrindra any Indianapolis mandrefy tsara sy fotoana isaky ny mitifitra mba hahazoana antoka fa mihabe ny tsirony. Matetika aho no mahita azy ireo manary sy mamerina mametaka tsaramaso mandra-pahatonga azy ireo voatifitra tsara - indraindray ny hamandoana dia mety hanimba.
Tsy dia lafo toa an'i Starbucks izy ireo ary tena tsara lavitra (tsara lavitra noho ny amin'i McCafé), nefa tsotra sy fotsy ilay kaopy. Tsy misy zavatra manokana… afa-tsy izay ao anatiny. Izay no tonga novidiko, sa tsy izany? aho do mandoa ny traikefa izay atolotry ny fivarotana koa! Efitra maro, tsy misy tariby maimaimpoana ary seza ahazoana aina.
Oh, ny lainga fonosana! Tsy azoko an-tsaina hoe ohatrinona ny vola lanin'i McDonalds nanandrana nanao izay tao anaty kaopy ho tsara kokoa avy any ivelan'ny kaopy.
Tags: nianjera i Jasonmult domain spffiraketana spf marobeppc masoivohoretargetingspf fitadiavanafiraketana spfspf firaketana an-tsoratraTantara mitohy amin'ny tele
Hafa ny mpividy orinasa!
12 Jan 2009 amin'ny 11:40 PM
Afaka miatrika kafe ratsy ihany koa aho, fa mahatsiaro ho toy ny Neny Motrin. Miaraka amin'ny Starbucks aho satria io ihany no toerana ahazoako miala sasatra amin'ny asa mafana sy manana toerana tsara amin'ny ririnina. Mitsentsitra ny andalana, tsy dia tsara ny kafe ary miharatsy ny atmosfera rehefa mihazakazaka toy ny biby kely ny ankizy.
Fivarotana kafe tsara sy mahaleo tena tsy fahita firy amin'ireo faritra ireo. Saingy, manana vitsivitsy aho ary manohana azy ireo fatratra. Ho ela velona anie ny kaopy tsy misy marika!
12 Jan 2009 amin'ny 11:47 PM
Efa nijerijery ve ianao Fivarotana kafe Indie? Angamba misy akaiky kokoa noho ny nieritreretanao azy!
Jan 13, 2009 ao amin'ny 8: 51 AM
FYI: Ao amin'ny Starbucks any Broad Ripple, kafe lehibe (venti) dia $ 2.00 mahery. Ny menio an-tserasera The Bean Cup dia milaza fa mitovy amin'izany ny $ 1.55. Heveriko fa ny tantaran'ny kaopy $ 4 dia avy amin'ny tsena toa ny NYC.
Saingy, lahatsoratra tsara Doug!
Jan 13, 2009 ao amin'ny 11: 03 AM
Izaho koa dia nanandrana ny kafe McBlech. Tsy niaina tsy fetezana ianao. Fantatro izany satria nomeko vintana telo izy ireo. Latina iray misy tsiroana caramel mangatsiaka. Latte mafana iray. Mocha mafana iray. Gaga aho fa tena ratsy izy ireo. Raha mahazo kafe ratsy be any amin'ny fivarotana kafe aho dia haveriko ary holazaiko amin'izy ireo mba hanandrana indray.
Tena ho gaga be aho raha toa ka misy olona manamboatra kafe kafe any am-boalohany. Ny vahaolana: nividy kalitao mendrika aho, nefa mbola milina espresso tsy lafo. Mety nandoa ho azy ilay zavatra tao anatin'ny iray na roa volana. Ankehitriny dia ataoko manokana izay tiako azy ireo amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Fantatrao izay lazain'izy ireo momba ny kisoa amin'ny akanjo.
13 Jan 2009 amin'ny 2:04 PM
Nahita anao aho noho ny dimy an'i Swoodruff tamin'ny maraina.
Tsy mpisotro kafe aho fa misotro dite ary misy toerana sasany izay misy "dite" amin'ny anarany fa maimbo amin'ny dite.
Liana te hahafantatra aho, tsy tsapanao ve fa hadisoana amin'ny marketing ny tsy fananana sary famantarana amin'ny kapoaka kafe?
Andao lazaina fa tena mila kafe ny olona X, mandalo ny olona Y mitazona kaopy kafe izy ireo. Manontany ny olona X hoe taiza no nahazoan'ny olona Y ny kafe. Angamba ny olona X dia ratsy ny manome torolàlana, mety tsy manana làlan-kizorana ny Person Y, mety tsy miteny anglisy tsara ny Person Y, ka sahirana i Person Y mahita ny fivarotana kafe. Raha nisy ny kaopy kafe banga raha ny marina dia nisy olona Person Y ho fantatro izay hotadiavina.
Andao hafindra amin'ny divay ny ohatra. Tadidiko ny anaran'ny divay sasany fa tsy izy rehetra. Rehefa handeha hividy divay aho dia mijery ireo marika mahazatra.
Mino aho fa zava-dehibe ny logo ary hadisoana ny tsy manisy marika ny vokatrao amin'ny sary famantarana anao.
13 Jan 2009 amin'ny 8:30 PM
Amin'ny maha-naman'ny The Bean Cup ahy dia azoko antoka fa tsy manana sary famantarana fotsiny izy ireo noho ny vidin'ny kaopy. Aleon'izy ireo mandany ny vola amin'ny tsaramaso be ary feno fankasitrahana aho amin'izany!
Misaotra an'i Steve tamin'ny fanonona azy ary manantena ny hiverina tsy ho ela ianao!
Jan 14, 2009 ao amin'ny 12: 00 AM
Aiza ity amboaram-bary lazainao ity? 😉
14 Jan 2009 amin'ny 11:44 PM
Lahatsoratra tena mahaliana. Ny maha mpankafy ny fivarotana kafe ankafizinao azy dia mahaliana azy ihany koa. Manaiky aho, mieritreritra aho fa mety hanampy ny The Bean Cup ny sary famantarana iray, fa mieritreritra ihany koa aho fa mety tsy mendrika ny vola hanaovana azy. Ao amin'ny ohatra etsy ambony, heveriko fa ny Person Y dia hampahafantatra mora foana ny Person X hoe taiza no nahazoan'izy ireo ilay kaopy kafe sy ny fomba hahatongavana any. Nolazaiko izany satria ny zavatra iray fantatro dia ny nanaovako izany tamin'ny fotoana maro.